saujanya – Page5– Rajdhani Daily
स्वर्गद्वारी यात्रा डा. श्रीराम खनाल काठमाडौंको कोलाहलबाट केही शान्ति पाउन र भगवान्प्रतिको आस्थाले स्वर्गद्वारीको यात्रा तय गरियो । यात्राको सुरुमा छोरा आश्रय र जीवनसंगिनी रश्मीसहित तीन जना मात्र थिया...
अनु अनि अनु
अनु अनि अनु ध्रुव रिजाल ‘गौरव तिमी कता ?’ विश्वविद्यालयमा तीनवटा कक्षा लिएर फर्किंदै गर्दा अनुले बस चढ्ने स्टेसन अगाडि सोधी । हुन त प्रश्नको जवाफ नदिँदा पनि हुन्थ्यो । किनभने उसले आफ्ना तर्फबाट धेरै ...
सोमतीर्थ र सुपा देउराली–२०
सोमतीर्थ र सुपा देउराली–२० प्रा.डा. विष्णुराज आत्रेय अब त्यहीँको चुनिलो माटो लिएर हत्केलामा दलिन् । अनि आफ्ना स्वामीको मुहारमा मृदभष्म लेपन गरिदिइन् । अनि शिवजीको सम्मुख भएर मुसुक्क हाँस्दै आफ्ना आँखा...
आत्मसन्तुष्टिका लागि बालुवा क्यानभास
आत्मसन्तुष्टिका लागि बालुवा क्यानभास सुधीर ढुंगेल पुरानो घरको एउटा शान्त कोठा । वरपर विभिन्न सजाइएका आकृति । कोठाको एउटा कुनामा तुलिकाघात नसकिएका अर्ध आकृतिहरू । असरल्ल रंगहरूका बट्टा, कुचीहरू, रङ लतप...
सोमतीर्थ र सुपा देउराली–१८
सोमतीर्थ र सुपा देउराली–१८ प्रा.डा. विष्णुराज आत्रेय अनि के गरोस् त उसले । सबैभन्दा पहिले सोमलाई देखेको रोहिणीले हो । सबैभन्दा पहिले रोहिणीलाई मन पराएको पनि सोमले नै हो‘ महादेवले भने ।‘आफै बाबु दक्षले...
नेपालको भूगोल देखेर लोभिन्छन् बंगाली निर्देशक
नेपालको भूगोल देखेर लोभिन्छन् बंगाली निर्देशक विश्व सापकोटा मौलिक फिल्मका पक्षपाती हुन् बंगाली निर्देशक खण्डेकर सुमन । उनी फिल्म बनाउँछन् । उनको फिल्ममा मनोरञ्जनयुक्त मसला हुँदैन । उनको मान्यता छ, ‘फि...
माया गर्न जानिनछु
माया गर्न जानिनछु दीपक ठकुरी अर्पित स्कुल नगएको एक साता भइसक्यो । अर्पितकी ममी निकै चिन्तित हुनुहुन्छ । उहाँले धेरै उपाय लगाउनुभयो । तर, उहाँका कुनै उपायले काम गरेन । उहाँ निराश हुँदै ...
गैंडासँग सेल्फी कृष्णकुमार मल्ल रहर थरीथरीका हुँदा रहेछन् मानिसपिच्छे । केही महिनौंदेखि गैंडासँग सेल्फी खिच्ने रहर पालेर बसेको थिएँ । तर, दिनभरि छोराछोरीसरहका विद्यार्थी भाइबहिनीसँग शैक्षिक क्रियाकलाप...
नेपाली चित्रसम्बन्धी एउटा नयाँ पुस्तक
नेपाली चित्रसम्बन्धी एउटा नयाँ पुस्तक डा. महेशराज पन्त भरखरै वर्ष दिन भयो, नेपाली चित्रसंबन्धी एउटा पुस्तकको लोकार्पण भएको । चित्रकारको वंशमा जन्मी चित्र बनाउने काम मात्र नगरेर नेपाली चित्रकल...
सोमतीर्थ र सुपा देउराली–१८ प्रा.डा. विष्णुराज आत्रेय अग्निले भगवान् शिवको आज्ञाअनुसार उनको तेजोमय रेतस् के धारण गरेथे, तिनको शरीर त त्यसको प्रभावले तत्काल सुवर्णमय भयो, हिरण्मय । हुताशन अग्निदेव सर्वभ...